ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရုပ်သံကြေး မိုးပေါ် ပျံတက်သွား | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရုပ်သံကြေး မိုးပေါ် ပျံတက်သွား
မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာရှင် လူရမ်းကား ခေါင်းဆောင်တသိုက်ကတော့ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းနေပါပြီ။ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားပဲ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို ပိတ်ဆို့ရမလဲ၊ ပြည်သူတွေ စိတ်ဆင်းရဲအောင်။ ပြည်သူတွေ ကျပ်သထက်ကျပ်လာအောင် ဘယ်လို နှိပ်ကွပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားနေသလားလို့တောင် ပြောရတော့မလို ဖြစ်နေပါပြီ။ စစ်အစိုးရရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ရန်လိုနေတဲ့ လူတယောက်ဟာ အခြားသူတွေနဲ့ ရန်မဖြစ်ရရင် မနေနိုင်သလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို ရန်သူလို သဘောထားမှ၊ ပြည်သူတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက် လုပ်ရမှ သူတို့ အာဏာမြဲနေမယ်လို့များ တွက်နေသလားပဲ။ ဒါကို လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ကြည့်ရင် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်တဲ့သူတွေဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ သူတွေပဲလို့ တပ်အပ်သေချာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နအဖဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာ သူတို့ စေတနာ မထားနိုင်တာတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ တနေ့တခြား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြလာနေပါတယ်။ နအဖ ဇာတိ ပြနေပါပြီ။ နအဖက သတင်းမီဒီယာနဲ့ ပညာရေး အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုပဲ လိုက်ပိတ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ လူထုအကြား သတင်းမှန်နဲ့ ဗဟုသုတတွေ ပိုမို စီးဆင်း ပြန့်ှနှံ့အောင်၊ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး အသိတရား ပိုမို နိုးကြားနေအောင် ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာ ဘလော့ဂါသမားတွေ၊ မြန်မာသတင်းဌာနတွေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက် ပညာရှင်တွေ၊ လူထုသတင်းထောက်တွေ၊ ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနတွေ၊ စာအုပ်စာတမ်း ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူးပေးနေသူတွေက ညီညီညွတ်ညွတ် တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ကူညီပေးကြရပါမယ်။ လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ အတော်လေး အားရ ကျေနပ်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေ ကျပ်သထက်ကျပ်လာအောင် တမင်တကာ ဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ တိုးတက်သွားမှာကို မလိုလားပဲ မရမက လိုက်လံ ပိတ်ဆို့နေတဲ့အကြောင်း သက်သေထူလိုက်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ကတော့ ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရုပ်သံကြေး တနှစ်တာ သုံးစွဲခကို ကျပ်တသန်းထိ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အမြဲ ပြောပြောနေတဲ့ ပညာရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့လည်း လုံးလုံးကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ စလောင်း ရုပ်သံကြေး တိုးမြှင့်တာကို နအဖက တရားဝင် ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုမှ စောဒက တက်လို့ မရနိုင်တဲ့ “အထက်အမိန့်” ဆိုတာနဲ့ နှုတ်မိန့် ပေးသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (လောင်စာဆီခွဲတမ်း တ၀က် လျှော့မယ်လို့ သတင်းထွက်သွားတုန်းကလို ဖြစ်နေပါတယ်။)
အဲဒီအကြောင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် သတင်းတွေ စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သတင်းတွေ ၀င်လာရင်လည်း စုစည်းသတင်းများအဖြစ်နဲ့ ထပ်ဖြည့်ထားပေးပါမယ်။ လွင်အောင်စိုး
ဒီဗီဘီ သတင်း more
ခေတ်ပြိုင် သတင်း မ
ဗီအိုအေ (မြန်မာသတင်း) လူထုနားမျက်စေ့ ပိတ်ဖို့ ဂြိုလ်တုစလောင်းကြေး အဆမတန် တိုးမြှင့်
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန မြန်မာပြည်တွင် ဂြိုလ်တု စလောင်းခွန်ကို ၁၆၆ ဆ မြင့်တက်
မြန်မာ့စာတိုက်နှင့် ကြေနန်းဌာနမှ အမည်မဖော်လိုသော အရာရှိများနှင့် ဂြိုလ်တုစလောင်း အသုံးပြုသူ ရန်ကုန်မြို့ခံ တဦးကို ကိုးကားသော အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတပုဒ်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဂြိုလ်တု စလောင်းခွန်များကို ရုတ်တရက် တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းကို………..အပြည့်အစုံသို့ .
ဂြိုဟ်တုစလောင်း နှစ်စဉ်ကြေး အဆများစွာ တိုးမြှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်တယ်လိုက် ဂြိုဟ်တုစလောင်း တပ်ဆင်ခွင့် လိုင်စင်ကြေးတွေကို အဆပေါင်း ၁၆၇ ဆ တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလို ရုပ်မြင်သံကြား ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တုစလောင်း နှစ်စဉ်ကြေးတွေကို အရင်က တနှစ်ကို ကျပ်ငွေ ၆ ထောင်ပဲ ပေးဆောင်ရတာကို၊ အခုအခါ ကျပ် ၁၀ သိန်းအထိ တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်တာ…….(အပြည့်အစုံသို့)
DVB (မြန်မာသတင်း) more
မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ဂြိုဟ်တုစလောင်းအခွန် ကျပ် ၅ သောင်းသို့ ပြန်လည်လျော့ကျ
ဂြိုဟ်တုစလောင်း လိုင်စင်ကြေးတိုးမြှင့်မှု ယာယီရပ်ဆိုင်း 08 January 2008
မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂြိုဟ်တုစလောင်းလျှောက်
အပြည့်အစုံ သို့ .
VOA (Burmese) ဂြိုဟ်တုစလောင်းလိုင်စင်ကြေး တိုးမြှင့်သည့်သတင်း ဖော်ပြခဲ့သည့် ဂျာနယ်အချို့ ထုတ်ဝေခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
အင်္ဂလိပ် သတင်းများ Satellite TV costs soar in Burma
International Herald Tribune, France – Myanmar Regime Imposes Satellite TV Fee The Associated Press
Written by Lwin Aung Soe March 6, 2008 at 7:49 am
Tagged with ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရု�	« သိုဟန်ဘွားလိုမင်းနှင့် မင်းကြီးရန်နောင်လိုလူ
ပီညဲရိုး အစီရင်ခံစာ (မြန်မာဘာသာပြန်) »